NY FITIAVAKO ANAO ...
Ny fitiavako anao,
Tena fitiavana madio,
Tsy nisy tambiny,
Toy ny an'ny mpilalao,
Niserana toa tadio,
Tsy mba nisy ambiny.
Tsy nampoiziko ;
Hay tsara kalitao,
Tsy nahafotsy rora,
Ka tena nankafiziko.
Tena niorim-paka ;
Izay rehetra natao,
Sy niarahana nizaka.
Raha ny fiarahantsika,
Tsy vitan'ny jerijery,
Na lasa seho ivelany ;
Ka ny endrika sy bika,
No nibahana nanery,
Nampivoaka ny felany.
Niroso tena matotra,
Nanorenana tokantrano ;
Ny teny mamy nabitsika,
Tsara noho ny angano.
Ny tokantrano naorina,
Sy nisinton-jazalahy ;
Ka tena mafy orina,
Tsy amin'ny ahiahy.
Niha maro ny taranaka,
Niriaria sy nifankatia,
Sy nifampitsinjo foana ;
Ka rehefa mba tafaraka,
Niezaka haha te ho tia,
Tsy diso amin'ny fotoana.